Haweeney Soomaliyed oo ka mid noqotay 9-haween oo Mareykanka Abaal marin gudoonsiisay (Daawo-Sawirro) – idalenews.com
Haweeney Soomaaliyed ayaa ka mid noqotay ilaa sagaal haween oo dowladda Mareykanka ay gudoonsiisay abaal marin, xilli maalinimadii shalay ku beegneyd Maalinta Haweenka Aduunka ee 8-da Maarso.
Fartuun Cabdisalaan xaaji Aadan oo ah madaxa Hey’adda Elman Peace ayaa la gudoonsiiyay abaal marin ay bixiso Wasaarada Arrimaha Dibada Mareykanka, waxaana abaal marintan loo siiyay doorka ay ka qaateen ilalinta xuquuqda haweenka iyo caruurta.
Xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka John Kerry iyo Marwada koowaad ee Madaxweynaha Mareykanka Micheal Obama ayaa gudoonsiiyay abaal marinta, kadib xaflad ka dhacdat magaalada Washington.
Micheal Obama ayaa sheegtay in haweenkan ay u istaageen sidii ay u difaaci lahaayeen xaquuqda haweenka iyo tacadiga loo geysto, waxaana ay ku ammaantay sida haweenkan u guteen waajibaadkooda ka saaran xuquuqda haweenka iyo caruurta.
Xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Maamulka Obama uu diirada saarayo sidii xuquuqda haweenka loo difaaci lahaa sida uu yiri, waxaana uu tilmaamay in Safaarada Mareykanka ee Caalamka ay bilaabeen mashaariic lagu difaacayo xuquuqda Haweenka.
Haweenka abaal marinta la gudoonsiiyay ayaa waxaa ka mid ah haweeneydii u dhalatay Hindiya ee lagu kufsaday Baska, taasoo ka mid aheyd dhacdooyinka ugu waa weynaa ee caalamka ka dhacay.
Sagaalka haween ee abaal marinta la gudoonsiiyay ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Soomaaliya, Afganistan, Nigeria, Suuriya, Ruushka, Shiinaha. Vietnam, Honduras iyo Hindiya oo lagu tilmaamo dalalka tacadiga haweenka loogu geysto.
Haweenkan la gudoonsiiyay abaal marintan ayaa waxay socdaalo ku kala bixin doonaan Gobolada dalka Mareykanka
Dhinaca kale Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan oo seygeeda lagu dilay Soomaaliya sanadkii 1996-dii ayaa wareysi ay siisay VOA-da ay sheegtay in markii ay ka carartay Soomaaliya ay dib ugu laabatay sanadkii 1997-dii, si ay u sii wado howsha Hey’adda Elman, xilli dalka ay ka jireen colaado, waxaana dhowaan ay sameeyeen Dalad loogu magac daray Sister Somalia, si ay uga qeyb qaataan difaacida xuquuqda Haweenka.